अर्थमन्त्री शर्माको यस्तो घोषणाले दलहरुमा भूकम्प के भने त्यस्तो ? — Imandarmedia.com
अर्थमन्त्री शर्माको यस्तो घोषणाले दलहरुमा भूकम्प के भने त्यस्तो ?
काठमाडौ। वाईसीएललाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएर अघि बढ्न शर्माको निर्देशन।
हतियार बोक्नका लागि तयार रहन प्रचण्डको युवाहरुलाई निर्देशन, फेरी पनि क्रान्ति गर्ने उद्घोष।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संगठन विभाग प्रमुख तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टीको युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)लाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।
वाईसीएलको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै शर्माले विगतमा पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दालाई बोकेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘कार्यकारी प्रमुखको कुरा, समानुपातिक निर्वाचन, पहिचान र विशेष अधिकारका मुद्दा बाँकी छन् ।
ती मुद्दाहरूलाई समातेर अगाडि बढ्नुस्,’ उनले भने । वाईसीएल मुद्दा विहीन बनेमा जीवन्त नहुने शर्माको भनाइ थियो । उनले विगतमा पार्टीले उठाउँदै आएका र पूरा हुन नसकेका मुद्दालाई फेरि उठाउनुपर्ने बताए ।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय प्रणालीमा जानुपर्ने माग उठाएको थियो । तर संविधान निर्माणका क्रममा सहमति गर्दै माओवादी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा लागेको थियो ।
वाईसीएलले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा बोकेर अघि बढ्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो । उनले संगठनलाई विस्तार गर्दै सदस्यलाई रोजगारी र उत्पादनमा जोड्ने योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
संगठनले तय गरेका नारालाई कार्यान्वयन गर्न र गुटबन्दी नगरी सहमति गरेर अघि बढ्न पनि शर्माले निर्देशन दिएका छन् । उनले सहमतिका आधारमा नै संगठनमा कार्यविभाजन गर्नका लागि सुझाव दिए ।
हतियार बोक्नका लागि तयार रहन प्रचण्डको युवाहरुलाई निर्देशन, फेरी पनि क्रान्ति गर्ने उद्घोष
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हतियार बोक्नका लागि तयार रहन युवाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । वाईसीएल नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अब देशमा समाजवादी क्रान्ति गर्न पर्ने भएकाले उत्पादनका हतियार बोक्न निर्देशन दिए ।
‘अब हामी नेपाली विशेषता भएको समाजवादी क्रान्तिका लागि तयार रहनुपर्ने बेला भएको छ । अबको समाजवादी क्रान्ति उत्पादनसँग जाडिर गर्न पर्नेछ ।’ भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘कृषि औजाहरु बोक्नका लागि सबै युवाहरु तयार हुनपर्छ । त्यसका लागि हामी बातावरण बनाइदिन्छौँ ।’
अहिले आफूहरु विजयी मुडमा भएको भन्दै प्रचण्डले फरक प्रसंगमा भने, ‘तर कहिलेकाहिँ के हुन्छ भने विजयी भयो भनेर रिल्याक्स गर्न थाल्दा रहेछौंँ, कुनबेला घन हान्छन् पत्तो हुन्न’ ।
पहिलोपटक ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि माधव नेपालसँग मिलेर लड्डु खाएको प्रसंग स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘पहिलो चोटी संसद पुनर्स्थापना भएपछि माधवले र मैले लड्डु खाइयो । त्यो लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन दुईटा पार्टी भए । ड्याम्म फेरि टाउकोमा धन हानेजस्तो आइहाल्यो । बल्ल बल्ल त्यसलाई सम्याइयाछ, अब के आउने हो भन्नेमा पनि सर्तक हुनुपर्छ ।’
समाजवादी विचारमा स्पष्ट भएमा तथा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नेतर्फ इमान्दार भएमा जित निश्चित भएको प्रचण्डले बताए । प्रचण्डले आफूले छिट्टै राजनीतिबाट बिदा हुन चाहेको बताए । युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफू राजनीतिबाट बिदा हुन चाहेको र फूसर्दमा संस्मरण लेख्न चाहेको उनको भनाई छ ।
‘समाजवादी क्रान्तिको नेता हुने अवसर युवामा छ । अब मलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा लिएर संस्मरण लेख्न मन छ’ प्रचण्डले भने, ‘तर तपाईहरु तयार नभएसम्म मलाई सुख छैन ।’ सो क्रममा प्रचण्डले ३८ सालमा आफू युवा संघको अध्यक्ष भएको र विभिन्न परिवर्तनको आन्दोलन देख्दै, भोग्दै यहाँसम्म आइपुगेको पनि सप्रसँग ब्याख्या गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले ओली एउटा भन्ने र अर्कै गर्ने नेता भएको बताए । ओलीले ठिक विपरित कार्य गरेको आरोप समेत प्रचण्डले लगाए । केपी ओलीमा भन्ने एउटा गर्ने अर्कै प्रवृत्ति छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ रे । भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई देख्न पनि चाहन्नँ भन्ने भाषामात्रै रहेछ’ उनले भने, ‘रक्सी अर्कै छ, लेबल त्यो राख्ने भन्ने रहेछ उहाँको बानी त ।’
पार्टी एकता ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गठी धन्दामात्रै चलाएको पुष्टि भएको प्रचण्डले आरोप लगाए । ‘कतिपय साथीले एकता गर्नु नै बेकार रहेछ पनि भन्नुहुन्छ, तर एकता गर्नैपथ्र्यो’ प्रचण्डले भने, ‘विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनलाई निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपीले सही गरेका छन् । अध्यक्ष र प्रम पालो पालो बन्ने भन्नेमा सही गरेको छ । तर प्रम प्राप्त गर्नका लागि केपीको सबै ठगी धन्दा रहेछ ।’
गठबन्धनको बैठकमा केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्ने प्रश्न नेताहरुले गरेकोमा आफू नाजवाफ भएको उनले बताए । उनले भने, ‘केपीसँग एकता गरेर ठूलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु, त्यो ज्ञान काँग्रेसलाई काम लाग्छ, माधवजीलाई पनि काम लाग्छ ।’ उनले आफूहरु घ्यूभन्दा नरम रहेको तर अत्याचार भयो भने विद्रोह गर्ने पनि आफूहरु नै भएको बताए ।
‘प्रचण्ड’ले ओली प्रतिगमनको नाइके भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनलाई निमन्त्रण दिएको तर सबै दलहरु एकढिक्का भएर प्रतिरोध गर्दा प्रतिगमन परास्त भएको उनको भनाइ छ । उनले समाजवादी यात्राको तयारीको लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता गरिएपनि प्रतिगमनको नाइकेहरूका एकता नटिकेको उल्लेख गरे ।
उनले पहिलोपटक भएको संसद विघटनलाई आफूले जनयुद्धकै एउटा रुपका रुपमा लिएको स्मरण गर्दै त्यसलाई प्रतिगमन भनेर युवाहरुले साथ दिएको भन्दै प्रशंशा पनि गरे । ‘संसद विघटन विरुद्ध उभिँदा सबैले जीवन मरणकै संघर्षका रुपमा लियौं ।
पटक पटक लाखौँ जनता सडकमा उतारियो । अरु दलल पनि संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध घात हो भनेर एकजुट हुनुभयो’, उनले भने । समाजवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने कार्यमा युवाहरु जुट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले वातावरण पनि रहेको बताए । ‘समाजवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउन अहिले वातावरण छ’ उनले का नेता कार्यकर्तालाई भने, ‘हाम्रो आशा तपाईँहरूमाथि छ ।’
पछिल्लो समय बनेको राजनीतिक गठबन्धनको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले यो गठबन्धन धेरै दुःखले बनाएको बताए । उनले भने, ‘यस अर्थमा पनि धन्यवाद भन्छु कि निरंकुश र प्रतिगमनकारीलाई परास्त गर्दै अहिलेको ठाउँमा आइपुगियो । हाम्रो आशा तपाईँहरूमाथि छ । हामी जीवनको उत्तरार्द्धमा छौं ।’ विचार र प्रवृत्ति बुढो नहुने बताउँदै उनले यसका लागि युवाहरुलाई प्रमोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नको लागि समाजको लक्षित समूदायलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले २०३८ सालको युवाहरुको राष्ट्रिय भेलाको सम्झना गर्दै अहिलेका युवाहरुको गति तुलना गरे । उनले भने, ‘पञ्चायतको दमन र दबदबा थियो । भारतको कुसीनगरमा भेला भएको थियो । त्यसको म उद्घोषक थिएँ । तपाईँहरुको प्रस्तुति र स्प्रिट हेर्दा ४० वर्षको पिरियडमा के कस्ता बदलाब भए भन्नेबारे समीक्षा भयो ।’
वामपन्थी र काँग्रेस मिलेर पञ्चायतलाई परास्त गरेपनि परिवर्तन अपुरो रहेको भन्दै जनयुद्धमा गएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘खासगरी गणेशमान सिंहलाई कमाण्डर मानेर गरिएको आन्दोलनबाट पञ्चायत ढल्यो । पार्टीमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो । मार्क्सवादी र माले बनेर एमाले बन्यो, काँग्रेसले चुनाव जित्यो । काँग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधका कारण मध्यावधि बन्यो । परिवर्तन अधुरो र अपुरो छ भन्ने निष्कर्ष निकालेँ र तात्कालीन पार्टीभित्र पारित पनि भयो–मध्यावधि निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेर जनयुद्धको सुरुवात भयो ।’
जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै जगबाट परिर्वतन भएको स्मरण गर्दै त्याग र बलिदानको ठूलो कीर्तिमान निर्माण भएको बताए । उनले भने, ‘पृथ्वीनारायण शाहपछि धेरै ठूलो आन्दोलन थियो त्यो ।’